Sony Xperia Z5 Premium, mamakafaka azy amin'ny video | Androidsis
Sony dia nanome ny lakolosy lehibe nandritra ny fampisehoana ny findain'izy ireo tamin'ny fanontana farany an'ny IFA any Berlin. Ary io dia tsy nisy nanampo ny mpanamboatra Japoney hanolotra ny telefaona voalohany amin'ny efijery 4K; ny Sony Xperia Z5 Premium.
Araka ny fantatrao tsara, Sony Spain dia nanapa-kevitra ny hanao raha tsy misy ny Xperia Z4. Ny orinasa mihitsy no nanaiky fa tsy laharam-pahamehana ity telefaona ity, ka nanapa-kevitra ny andrana ny Espaniola fa hiandry ny taranaka ho avy. Ary mahita ny Sony Xperia Z5 Premium, mazava fa tena nahavita tsara izy ireo.
Sony Xperia Z5 Premium, telefaona mahery miaraka amin'ny efijery 4K
Ary io dia raha heverintsika fa ny Sony Xperia Z5 Premium dia mitentina 100 euro fotsiny mihoatra ny maodely mahazatra, Heveriko fa tena ilaina ny mandany an'io fahasamihafana io raha afaka mankafy ireo tombony atolotra an'ity karazana haitao ity.
Inona no tadiavinao a Telefaona efijery 4K? Raha ny tokony ho izy dia tsy hanararaotra ny tontonana UHD ianao izay mampiditra ny Sony Xperia Z5 Premium, fa raha raisinay kosa fa ny fakantsary Sony Exmor 23 megapixel matanjaka dia mamela anao handrakitra horonantsary amin'ny vahaolana 4K, ny Xperia Z5 Premium Ny tontonana dia hahafahanao mankafy azy rehetra ireo ny horonan-tsary noraketinao tamina kalitao avo indrindra, na inona na inona ny fanapahan-kevitra nanoratanao azy ireo.
Raha manampy an'io izahay dia manana processeur mahery Qualcomm Snapdragon 810Matokia fa io ilay kinova tsy misy olana tafahoatra, fahatsiarovana RAM 3 GB, fitehirizana anatiny 32 GB azo itarina amin'ny alàlan'ny slot micro SD card sy ny fanoherana ny vovoka sy rano, azontsika atao ny milaza fa nahavita asa lehibe i Sony.
Volavola Omnibalance mitovy? Eny, tsy misy olona afaka mandà izany ny mpanamboatra Japoney dia nanapa-kevitra ny hiloka amin'ny tsipika fitohizany. Ny tsiron'ny tsirairay dia tonga eto, ny olona sasany dia tsy tia fa ny faritra Xperia Z iray manontolo dia manana endrika mitovy amin'izany, tsy miraharaha ireo mpampiasa hafa.
Ary ianao, mieritreritra ve ianao fa hevitra tsara ny fitrandrahana ny famolavolana Omnibalance ny faritry Xperia, oeIty Xperia Z5 Premium ity dia tokony ho nanana endrika vaovao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sony Xperia Z5 Premium, nanandrana ny telefaona voalohany tamin'ny efijery 4K izahay
Hansel De Aguas® dia hoy izy:
ny g3 tsy 4k?
Valiny tamin'i Hansel De Aguas®
Ny g3 dia 2k
Ary tsy ny horonan-tsary ihany, fa tokony hojerentsika ihany koa fa ny sary 8 megapixels na avo kokoa dia efa 4k vahaolana ary amin'izay dia ho hitantsika amin'ny fomba tsara kokoa ihany koa izy ireo, izay tsy misy fitaovana ankehitriny
ny overheating dia nihena noho ny faritra miely 2 napetrak'izy ireo. Fa satria mivoaka amin'ny volana novambra dia mora ho azy ireo ny niandry kely ary nametraka ny bateria 820 sy bebe kokoa, satria 3430mah ao anaty 4k dia kely dia kely . Ny efijery koa dia tsy tonga any amin'ny faran'ny lafiny toy ny c5 ultra ary ny bezela dia mbola lehibe sy very fotsiny.
Jose Enrique dia hoy izy:
Vitsy kokoa ny fe-potoana ary maharitra ny androm-piainany.
Valiny tamin'i JoseEnrique